Zimbabwe – United Africa News
The United States said on Monday it had cut financing to three Zimbabwean civil action groups citing “possible misuse” of money ahead of July 30 elections, the first vote since Robert Mugabe was removed. The […]
Oppositionist intends to create “government on national unity” to develop Zimbabwe’s economy
Harry Peter Wilson, leader of the Democratic Official Party (DOP) says he will try to create a “government of national unity” for Zimbabweans to work together to improve the economic situation. This presidential candidate says […]
Sudan condemns Zimbabwe election rally explosion
Sudan condemned the explosion at a Zimbabwe’s election rally. The Sudanese Ministry of Foreign Affairs condemns in the strongest possible terms the explosion during an election rally in the city of Bulawayo, calling it “a […]
Blast rocks Zimbabwe president campaign; Mnangagwa not hurt
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa not injured and evacuated from stadium in city of Bulawayo where he addressed supporters, his spokesperson said. Zimbabwe state media say an explosion has struck the stadium where Mnangagwa was addressing […]
Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa queued with punters to buy fried chicken this weekend, state media reported on Monday, setting out the former security chief’s ‘everyman’ credentials a month ahead of an election. In scenes unthinkable […]
President Emmerson Mnangagwa says the Zimbabwe that citizens want is one full of hope, where there are abundant investment and opportunities. Speaking in Harare this afternoon at the commissioning of Pepsi Zimbabwe Manufacturing Company’s plant, […]
Zimbabwe will maintain its soldiers deployed in Equatorial Guinea to provide security to the country’s leader Teodoro Obiang Nguema Mbasogo as well as train the West African nation’s military, it has been established. Relations between […]